Izinto ze-5 okumelwe wazi ngeCisco CCNA Certification | ITS
16 -nov 2017
Izinto ze-5 okumelwe wazi ngeCisco CCNA Certification
I-Cisco CCNA Certification
Yini i-CCNA Certification?
Yiziphi izinhlobo zezihloko eziyingxenye yeCisco CCNA Certification?
Iyini izindleko zokuthatha ukuhlolwa kweCisco CCNA Certification?
Ngizokwazi kuphi ukuthola ama-guide we-CCNA mahhala?
Indlela yokuhlela ukuhlolwa kwe-CCNA Certification?
Isikhathi nomsebenzi okhuthele ekuthengeni isitifiketi somsebenzi ngokweqile kuphelela ekuzuzeni ngokuhamba kwesikhathi. I-Cisco CCNA Certification uhlelo olulodwa olunjalo olungasiza ekuqinisekiseni amakhono omuntu womuntu ensimini ethile futhi kubangele ukuxhaswa kwezinga elisezingeni elilandelayo.
I-CCNA iyanconywa njengeCisco Certified Network Associate, uhlelo lokuqinisekisa isitifiketi. Ngesikhathi umuntu ephumelele ukuthola iziqu, babhekwa njengabaqeqeshiwe ekuphathweni kwezinhlelo namakhono ahlobene.
Ukuhlolwa kwesitifiketi kuhlolwe futhi kunikezwe yi-IT eqinile i-Cisco eqinile. Ngokucabangela indlela cishe yonke imboni idinga ukuhlela amalungiselelo, lesi sifundo sithole ukusabalala okukhulu phakathi kwezifundiswa ze-IT futhi kumelela phakathi kwezinhlelo eziqinisekisiwe kakhulu zeziqinisekiso.
Ngenkathi uhlelo lube ludlule iminyaka embalwa manje, inhlangano i-Cisco eyalandela lolu hlelo lokuqinisekisa isenza ithuthukise futhi iguqule lezi zihloko ngenhloso yokuthi zihambisane nokushintsha amaphethini embonini.
Ukuhlelwa kabusha okuphawulekayo kwenziwa ngonyaka we-2013 ngenkathi bakha izivivinyo ezihlukahlukene zemisebenzi ethile eyenza ochwepheshe babe nolwazi oluthile ebangeni elithile. Isamba se-9 ezihlukahlukene ze-CCNA themes njengamanje kufinyeleleka futhi ungakhetha isihloko esifanele esiqondile ngokubheka izinhloso zakho zesikhathi esizayo.
CCNA Cloud - Le ndaba igxila ekuthuthukiseni ifu, ukugcinwa kwempahla kanye nokuhlelwa kwamafu e-Cisco. Njengoba i-cloud innovation iba yinto evamile, lokhu kubhekwa njengomfula ophawulekayo wabathengi abaningi bokuhlola.
CCNA Ukubambisana - Ochwepheshe abasebenza ekukhulumisaneni kwe-IP, izinkampani ezihlelayo zingakhetha ukusebenzisana okuyinkambo efinyelela kude ehlanganisa izinto ezintsha ezivezwe ngezwi, idatha, ividiyo kanye nezicelo eziphathekayo.
I-CCNA Cyber ​​Ops - Isitifiketi lapho siphelile sibonisa ochwepheshe onguchwepheshe wezokuphepha we-cyber ohlonyelwe ukuphatha ukuphepha okuphakeme kwe-association.
I-CCNA Data Center - Izihloko ezihlanganisiwe kulolu vivinyo oluthile luhlanganisa ukwakha isikhungo sedatha, ukuhlela uhlelo, ukuphathwa kwedatha, ukugcina i-gear ne-hardware.
CCNA Industrial - Isitifiketi sikwenza umuntu aqonde ukuphathwa kwezinhlelo kanye nokusebenza okudingekayo ukuze kusebenze izisekelo ezimboni ezibandakanya amafutha, igesi, izindawo zikagesi nokuqoqa.
CCNA Ukuhamba Nokushintsha - Isihloko esiyinhloko sokuthi i-Cisco igxile ku - kuyadingeka ngokuphelele ukugunyazwa kuzo zonke izinhlelo zokwakha futhi kuyisivivinyo esiyisisekelo nanoma yiluphi uhlelo lochwepheshe olungathatha.
CCNA Security - Umuntu oqeda lolu hlelo uqinisekiswa ukuthi unolwazi olwanele ekuvikeleni idatha, ukubuka ukufinyeleleka kwalo, ukwabelana futhi kungasiza ukuhlanganisa isisekelo esiphezulu esivikelwe sembonini.
Umhlinzeki Wesevisi we-CCNA - Inkambo iphelile ngabantu abasebenzela ukubhalisa njengabachwepheshe besistimu ukusiza izinhlangano njengesevisi. Ukuze uqedele inkambo, zidinga izimo ezivelele nokuguquka okuqinile kumaphethini wamanje kuhlelo lokuphatha.
CCNA Wireless - Zonke izinhlelo zokungenazintambo zokuphatha izindlela ezintsha ezihlobene nazo ziqinisekiswa lapho uchwepheshe eqeda lesi sivivinyo ngokuphumelelayo. Baphethe ukuhlela, ukugcina izinga lomsindo nokubeka uhlaka oluvikelekile olungenazintambo.
Ukuhlolwa kwe-CCNA ngayinye kufanele kusetshenziswe kuphela. I-Cisco ine-CCNA yokuhlolwa yokuhlolwa kwezindleko ze-$ 295 ngokuhlolwa kokubili. Ukulinganisa kungashintshashintsha ngenxa yesifunda ohlala kuso, shintsha amanani neziguquko ezahlukene. Kuyinto ehlakaniphile ukuhlola indawo esemthethweni ngaphambi kokufaka isicelo sokuhlolwa.
Ukuthola mahhala Iziqondiso zokutadisha ze-CCNA phezu kwewebhu akuyona into enzima njengoba kungenzeka wacabanga. Kukhona amafa ambalwa kanye nabahlinzeki bezinsizakalo zokuhlola abanganikeza zonke iziqondiso eziyinhloko mahhala.
Ngenkathi ezinye zalezi ziqondiso zifinyeleleka kwi-intanethi njengamaxhumo alayishiwe, ku- YouTube futhi ngokusebenzisa amandla okuqondisa izindawo, nawe ungavuma ukwamukela amaphrojekthi alinganisiwe anikezwa izinhlangano ezicatshangwayo. Ukuvumelanisa ukwamukela izifundo ezinjalo kusiza ukuthola okusheshayo Iziqondiso zokutadisha ze-CCNA njengoba kubalulekile ngaphandle kwezindleko nokusiza kochwepheshe kubaqeqeshi abaqedile ngokuphumelelayo ukuhlolwa kwe-Cisco.
Ngaphambi kokuba uphendule, kubalulekile ukuqaphela ukuthi asikho isitifiketi sokuqala sokuthatha isilingo sokwethemba. Noma kunjalo, i CCNA Ukuhamba nokushintshwa isisekelo sokuhlolwa komunye nomunye. Kubhekwa njengokunciphisa kakhulu futhi kuzokusiza ukuba usule izivivinyo eziyinkimbinkimbi.
Njengoba kunezindawo eziyisishiyagalolunye zokuzikhethela ezihlukile zokubheka, izinkinga zokusula ukuhlolwa zixhomeke ekutheni uzizwa kangakanani ensimini.
I-CCNA yamakilasi okufundisa kanye namamojula akuyisisekelo sokuqonda isilabhasi kangcono ngaphambi kokuzama ukuhlolwa
Ngempela, ngisho nochwepheshe we-IT onesikhathi eside kakhulu sokubandakanyeka ensimini kufanele acabangele ukuqondisa ukuqondisa nokuqonda umklamo wokuphenya. Kuzokwenza ukuba umuntu afaneleke ekusebenzeni okuyinhloko.
Thatha abaningi ukuqhuba izivivinyo, yindlela ephakanyisiwe kakhulu. Kuyasiza ukuhlaziya izimpendulo zakho, ukudlulisa izimpendulo ngokushesha futhi kuzokusetha ukuze uthathe ukuphela kokuhlolwa konyaka ngaphandle kokuzizwa unesabekayo.
Isivivinyo siqondiswa isamba se-1000 esikhipha okumele ulandele i-825 ukuze ufaneleke.
Ngaphansi kwalokho, imizuzu ye-30 okufanele isetshenziswe usuku nosuku ukuze ihlukumeze izincwadi njengezifundo zokuzicabangela kuyisisekelo sokuthola I-CCNA isitifiketi. Uma kungenzeka ukuthi uthola noma yiziphi zezihloko ezinzima, cabanga ukutshalwa amandla amaningi noma ujoyine isakhiwo sokulungiselela esithembekile. Thola ukuhlolwa kwamahhala kuwebhu bese uzama ngesonto ngesonto.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo eziningi zokuqinisekisa izitifiketi, i-CCNA yi-Cisco ibhekwa njengengcindezi ngenxa yokuthi idinga ukuthi umuntu abe neningi emhlabeni futhi nolwazi oluyinkimbinkimbi emkhakheni wezinkathazo. Kunoma yikuphi, uma uzibophezela ekuqondeni imibono bese uthatha isakhiwo sokutadisha okuqhubekayo, kulula kakhulu ukuphendula imibuzo ekuhlolweni kwangempela.
Ngaphezu kwalokho, izinhlangano zangempela emhlabeni wonke ziqhubeka zifuna abaqeqeshiwe abahlelekile ukujoyina iqembu labo. Yiba uhlelo lokuphatha uhlelo lwezintambo ezingenantambo, inkosi yokuphepha noma umphathi wedatha yedatha, izingxenye zomsebenzi ezandisiwe zinikeza ukukhethwa okujulile kokuzikhethela. Ukuthuthukiswa komsebenzi kanye nokuthuthukiswa kwamagama okunikezwa ngu. A CiscoI-CCNA Certification ubeka impela isikhathi esichithwa ekuzilungiseleleni ukuhlolwa.
Yini okusha ku Cisco's Data Center - CCNA Data Center
Izitifiketi eziphezulu ze-10 Cloud for 2018